Pinterest र WordPress
Pinterest प्रयोग गरीरहेको छ प्रयोगकर्ता र व्यस्त SEO लाई
मंगलवार, मार्च 27, 2012 शनिबार, फेब्रुअरी ०१, २०२० अस्टिन गुन्टर
Pinterest सामाजिक नेटवर्क मा नवीनतम ठूलो कुरा भएको छ। Pinterest, र अन्यहरू, जस्तै Google+ र फेसबुक, प्रयोगकर्ता आधारमा छिटो प्रयोगकर्ता आधार बढ्दछन् जुन वास्तवमा प्रयोगकर्ताहरूले सेवा कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सिक्न सक्दछ, तर विशाल प्रयोगकर्ता आधारको मतलब सेवालाई बेवास्ता गर्नु मूर्खता हो। यो तपाइँको ब्रान्ड बढ्न को लागी एक अवसर हो। हामी डब्ल्यूपी इञ्जिनमा पिन्टेरेस्ट प्रयोग गर्दैछौं, त्यसैले म पोस्टमा हाम्रो ब्रान्डमा उपयोगी उदाहरणको रूपमा लिनेछु।
सर्वप्रथम, Pinterest प्रयोग गर्ने टेक ब्रान्डले मतलब नहुन सक्छ ... किनकि हामी विवाहको लुगा बनाउँदैनौं, र हामी कुकरी बेच्दैनौं, किन हामी पिन्टरेस्ट प्रयोग गरिरहेका छौं? हामी यसलाई प्रयोग गर्दैछौं किनकि पिन्टेरेस्टमा एसईओ लाई बढाउने अद्भुत क्षमता छ, र एक अनलाइन टेक स्टार्टअप ब्रान्ड बढाउन, र अनलाइन मार्केटरहरूले लिंक भवनको लागि यसको प्रयोग गर्न चाहान्छन्।
Pinterest एकदम सरल अवधारणा हो, elegantly कार्यान्वयन।
पिनहरू छविहरू हुन् जुन तपाईं Pinterest मा थप्नुहुन्छ, वेबबाट कहिँबाट लिंक गरिएको, वा तपाईंको कम्प्युटरबाट अपलोड गरिएको। पिनले मूल सामग्रीमा ब्याकलिंक समावेश गर्दछ। तपाईं छवि क्याप्शन गर्न सक्नुहुन्छ र कोहीले पृष्ठमा टिप्पणी गर्न सक्नुहुनेछ। चित्रको साथ कुनै पृष्ठ पिन गर्न सकिन्छ।
बोर्डहरू भर्चुअल कर्क बोर्डहरू हुन् जहाँ प्रयोगकर्ताहरू र ब्रान्डहरूले पिनहरू राख्न सक्दछन्। बोर्डहरु श्रेणी द्वारा आयोजित गर्न सकिन्छ, "स्वादिष्ट बारबेक्यू," र "Killer Twitter अवतार," वा "इन्फोग्राफिक्स।"
रिपिनि। यो जस्तो देखिन्छ जस्तै छ। कुनै पिन पनी नयाँ बोर्डमा कसैलाई पछ्याउनका लागि "पुनःपेन्ड" गर्न सकिन्छ। यो जहाँ Pinterest भाइरल हुन्छ। यदि प्रयोगकर्ताहरूले निरन्तर पुनः प्रिनि start् गर्न सुरू गर्दछन् भने, तब तपाईंको सामग्री, र तपाईंको ब्रान्ड, नेटवर्कमा फैलिएको छ, हरेक पटक नयाँ ब्याकलिl्क सिर्जना गरेर।
Pinterest गजबको छ, किनकि सामग्रीको कुनै पनि पृष्ठ जुन छवि छ, एउटा पिनबोर्डमा साझा गर्न सकिन्छ, र यसले वास्तवमा सजिलो बनाउँदछ कि धेरै ठाउँमा एकै स्थानमा स collect्कलन गर्न सकिन्छ। विवाहको केकको तस्विरभन्दा बाहिर सोच्नु महत्त्वपूर्ण छ। तपाईं ब्लग पोष्टहरू, वर्डप्रेस विषयवस्तुहरू, तपाईंको कन्फरेन्सको पुनः क्याप साझा गर्न सक्नुहुनेछ, जुन तपाईंले दिएका कुराको तस्विर सहित।
प्रत्येक पटक प्रयोगकर्ताले तपाईंको सामग्रीलाई पुन: पिन गर्दछ, तपाईंले अर्को ब्याकलि get्क पाउनुहुनेछ।
त्यसोभए तपाईं कसरी पिन पिन तिर काम गर्नुहुन्छ? तपाईं सामग्री, उत्पादन, सेवा, र मनोरन्जनको बारेमा परिकल्पना बनाउनु हुन्छ जुन तपाईंको प्रयोगकर्ताहरूले रूचि राख्दछन्, र त्यसपछि तपाईं यसलाई पिन गर्न सुरू गर्नुहुन्छ। यसले पर्याप्त प्रयोगकर्ता सment्लग्नता लिन समय लिन सक्दछ, तर यदि तपाइँसँग राम्रो सामग्री छ भने, यो केवल समयको कुरा हो।
तपाइँका ग्राहकहरु बुझ्नुहोस्
डब्ल्यूपी इञ्जिनमा, धेरै हालका ग्राहकहरू वर्डप्रेस डेभेलपर हुन्। तिनीहरू अत्यधिक प्राविधिक छन्, र उनीहरू सामग्रीहरू खोज्दछन् जसले तिनीहरूलाई राम्रो सल्लाहकार र राम्रो विकासकर्ता र सल्लाहकारहरू बनाउन सक्छ। तपाईं आफ्नो ग्राहक व्यक्तित्व प्रोफाइल गर्न चाहानुहुन्छ, र त्यस पछि उनीहरूको रूचि अनुरूप सामग्री पिन गर्नुहोस्।
उदाहरणको रूपमा यहाँ केहि पिनबोर्डहरू हामी सुरू गर्दैछौं, र ती प्रत्येकका कारणहरू।
जंगली मा हेराईहरू: ब्रान्डेड टी-शर्ट लगाएका प्रयोगकर्ताले सबमिट गरेका तस्बिरहरू। तपाईं यी चित्रहरूको लागि कुनै पनि समयमा सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईंको कम्पनीले ब्रान्डेड स्वाग दिन्छ।
WordPress Newbies: आजको नुब भोलीको निन्जा हो ... हामी प्रतिभा र विशेषज्ञता विकासमा विश्वास गर्छौं ... यो असम्भव छ जसले भविष्यमा आफ्नै कम्पनी सुरु गर्न सक्दछ।
शानदार थिमहरू: थिमहरू वास्तवमै विषयगत कोटी हो, तर म विषयवस्तुहरू थप्न कडा मेहनत गर्दछु जसले चाखलाग्दो समस्याहरूको सुन्दर तरिकामा समाधान गर्दछ, वा आश्चर्यजनक रूपमा डिजाइन गरिएको हो।
कोड स्निप्पेट्स FTW: पिन्टेरेस्टमा टेक्निकल सामग्री पोष्ट कसरी गर्ने भन्ने महान् उदाहरण। जबसम्म पृष्ठमा फोटो छन्, म कोड स्निपेट्स वा साइट विकास पोष्ट गर्न सक्दछु।
टेक समर्थन बिक्री हो: हाम्रो कम्पनी संस्कृति बिक्री मा समर्थन प्राथमिकता, र हामी हाम्रो मार्केटिंग मा यो सुविधा। तपाईंको ब्रान्डको मुख्य मूल्य हुनेछ जुन यसलाई अद्वितीय बनाउँछ, र तपाईं यसलाई यहाँ फिचर गर्न सक्नुहुन्छ।
हाम्रो क्युरेटेड प्लगइनहरू: प्लगइनहरूको एक संसाधन सूची जुन हामीले परीक्षण गरीसकेका छौं र वर्डप्रेस डेभेलपरहरू प्रयोग गर्छौं।
ग्राहक प्रतिक्रिया: प्रत्येक ब्रान्डले वास्तविक ग्राहक प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूपमा फिचर गर्न आवश्यक छ। पिन्टेरेस्ट शक्ति र कमजोरीहरू बारे पारदर्शी हुन एक राम्रो ठाउँ हो।
यदि तपाईं प्रासंगिक सामग्री पिन गर्दै हुनुहुन्छ भने, पिन्टेरेस्टको अर्थ तपाईंको सामग्रीको लागि धेरै ब्याकलि back्क हुन सक्दछ। जब तपाईं आफ्नो आदर्श ग्राहकहरूको बारेमा सोच्नुहुन्छ, कल्पना गर्नुहोस् उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता के हो, उनीहरूले प्राथमिकता दिन्छन् र बेवास्ता गर्छन्, ती चीजहरूको सूची बनाउनुहोस्, र तिनीहरूलाई पिन गर्नुहोस्। तपाइँको अवस्थित सामाजिक मिडिया अभियानहरू प्रयोग गर्नुहोस् Pinterest मा आलोचनात्मक जनको रूपमा, र तपाइँको प्रयोगकर्ताहरूको सामग्री पुनः पिन गर्न नबिर्सनुहोस्।
टैग: PinterestएसईओWordPressWP इन्जिन
म WP इञ्जिनमा वर्डप्रेस (राजधानी "P") समुदाय भित्र राजदूतको रूपमा काम गर्दछु। म ब्लग गर्छु र वर्डप्रेस समुदायमा कनेक्शन बनाउँछु।
WP इंजिन प्रदान गर्दछ छिटो WordPress होस्टिंग विकासकर्ताहरूलाई उनीहरूको ग्राहकहरूको लागि अद्भुत वेबसाइटहरू सिर्जना गर्न।
तपाईको सर्वेक्षणलाई कसले उत्तर दिइरहेको छ? मान्य बनाइएको
दृश्यता र प्रभाव मार्फत पुरस्कार
बेलिंडा एम। म्याथ्यू
मार्क्स 27, 2012 मा 2: 33 PM
मैले पिनरेस्टलाई मेरो साइटलाई अनुकूलन गर्न प्रयोग गरेको छु र परिणाम अचम्मको कुरा हो कि मेरो साइट केही हप्ताहरूमा # २234 बाट # ed मा जम्प भयो।
चाल यो हो कि हामीले हाम्रो वेबसाइटलाई पिन गर्नुपर्दछ र धेरै व्यक्तिहरूले यसलाई पुन: मुद्रित गर्नुपर्दछ यो सबैभन्दा गाह्रो अंश हो। अधिकांश पिन्टरेस्ट प्रयोगकर्ताहरूले रिपिन गर्न सक्दैनन् जब उनीहरूले हामीले पिन गरेका जस्तो गर्दैनन्।
म यसलाई फाईभरमा आउटसोर्स गर्न साधारण चीज गर्दछु र मेरो साइट 70० भन्दा बढी व्यक्तिहरू द्वारा पिन गरिएको छ, मलाई थाहा छैन उसले कसरी फाइवरमा पिनटेरेस्ट टाइप गरेर खोज्यो र तपाईंले यसलाई पाउनुहुनेछ।
मलाई थाहा छ हाल पिन्टरेस्ट यी कारणहरूको लागि एसईओको लागि उत्तम हो:
१. एक पटक हाम्रो वेबसाइटले पिन गरेपछि यसको back ब्याकलिks्क गणना हुन्छ
२. सोशल मिडिया स in्केतमा Google रुचि ताकि यसलाई लिंक फार्मको रूपमा ट्याग गरिने छैन
Currently. हालसालै पिनरेस्ट लि links्कहरू तस्बिरलाई पनि खोक्रो बनाउँछन्
Also. ए an्कर पाठलाई पनि समर्थन गर्नुहोस्, हाम्रो कुञ्जीशब्दहरू राख्न यो उत्तम छ
किम चरिज लेविटा
मार्स 28, 2012 मा 8: 16 एएम
अति उत्तम पोष्ट! वास्तवमै सहयोगी। धन्यवाद sharing साझा गर्न को लागी धेरै
अप्रिल 4, 2012 मा 4: 51 PM
म यो मनपराउन कोशिस गर्दैछु ... तर म यसमा शून्य मान देख्दै छु। मँ पिन गर्दै छु र सगाई गर्दै छु र थोरै… अझ राम्रो हुँदै छ, यसबाट कुनै ट्राफिक छैन। मलाई थाहा छ यसमा सम्भाव्यता छ, तर म यो देख्दिन। यी सबै "सफलता" कथाहरू ठीक छन्, तर मैले व्यक्तिगत रूपमा सेवाको साथ सफलताको कहानी अनुभव नगरेसम्म म त्यहाँ धेरै समय खर्च गर्न सक्दिन।
यी सेवाहरू (पिन्टेरेस्ट र Google+ उदाहरणका लागि) फेसबुकसँग तुलना गर्न यो पनि अन्यायपूर्ण छ। फेसबुकका 820२० मिलियन भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरू छन्। त्यो बेतुका हो। म धेरै कम मानिसहरूलाई चिन्छु कि Google+ को लागि यस कुराको लागि प्रयोग गर्दछ। यो पिनटेरेस्ट को रूप मा अधिक मूल्य छ।
यो राम्रो छ। केहि चीजहरू पिन गर्न रमाईलो छ र यसले मलाई केहि विचारहरू दिएको छ। तर Pinterest एक खेल परिवर्तक होईन।
राम्रो पोस्ट यद्यपि। तपाइँलाई पिन्टेरेस्ट कसरी प्रयोग गर्ने थाहा छ।
अप्रिल 4, 2012 मा 5: 11 PM
म यसमा एक सानो contrarian हुन सक्छ जब यो एक कथन को लागी आउँछ ... यो र फेसबुक को बीचको तुलना बनाउने। मेरो विचारमा, प्रयोगकर्ताहरूको संख्यासँग हाम्रो मार्केटिंग प्रयासहरूमा कुनै सान्दर्भिकता छैन। यसको विपरित, म फेसबुकका साथ भन्दा Pinterest मा अधिक यातायात आकर्षित गर्दैछु!
जुलाई १,, २०१ at १::5२ अपराह्न
अस्टिन त्यहाँ एक राम्रो pinterst प्लगइन छ?